Blackjack ndiyo imwe yenzvimbo dzine mukurumbira makasa panguva dzokubhejera - Nyika-kwakavakirwa, paIndaneti uye Mobile. Unogona kuridza Blackjack mari chaiyo mFortune Mobile Casino. The game has simple rules that are easy to learn, asi kunoda unyanzvi kuti kutamba zvinobudirira. Izvi zvinoita Blackjack dzakakurumbira pamwe mudzidzi, uyewo nyanzvi vatambi.
Play Blackjack panguva Our Recommended Casino
Sei Play Blackjack
Unogona kuridza Blackjack pana mFortune Casino zvokungonakidzwa kana kuti mari chaiyo. Unogona kuisa vachibhejera zvinhu shoma sezvo 10p.
Chinangwa nyama yemhuka Blackjack ndiko kuzadzisa ruoko pedyo 21 pane peanoita, pasina kuenda pamusoro (kuputika). Kamwe iwe waisa vachibhejera zvinhu zvenyu, iwe uchava abatwe makadhi maviri utarisane uye peanoita achapiwa kugadziriswa rimwe kadhi chiso uye rimwe kadhi chiso pasi. The mutambi zvino vanofanira kusarudza sei kuridza ruoko. Unogona kumira kugumisa chijana chako; yakarohwa kugamuchira rimwe kadhi; kaviri pasi yenyu makadhi maviri okutanga kaviri bheji rako uye kugamuchira rimwezve kadhi; Wakapamura ruoko rwako mukati vachibhejera zvinhu zviviri zvakasiyana kana uine vaviri akafanana makadhi yako makadhi maviri okutanga kana kutora inishuwarenzi kana kadhi kumusoro-peanoita ndiro imwe Ace.
Makadhi All vane ukoshi uye tsika idzi awedzera pamwechete kuti kuchaguma zvachose kukosha ruoko rwako. Cards vaviri kuburikidza gumi vane nokuoneka kwazvinoita; chiso Makadhi ane ukoshi gumi uye Aces ane ukoshi mumwe kana gumi, zvichienderana kukosha vamwe ruoko rwako. The soro scoring ruoko rinozivikanwa Blackjack uye iri kadhi mbiri-ruoko zvinosanganisira ane Ace uye kadhi inokosha pa 10.
Kamwe chijana chako haasisiri (iwe enda bust kana imi mumire), peanoita anotamba rwake uye maoko vari richienzaniswa nemi vari kubhadharwa panze chero Unobata.
Phone Casino Games | Pocket Fruity cheap car insurance